रबर आईफोन केसहरूको बिरूद्ध केस: षडयन्त्र? तपाईं निर्णय गर्नुहोस्। - आईफोन
मा र टी आईफोन पदोन्नति 2016
पानी मा आईफोन बन्द छैन
यसको मतलब के हुन्छ जब तपाइँको हथेली खुजली हुन्छ
तपाइँ तपाइँको फोन मा एक मामला को उपयोग गर्नु पर्छ
रबर आईफोन केसहरूको बिरूद्ध केस: षडयन्त्र? तपाईं निर्णय गर्नुहोस्।
आईफोन पावर बटनहरू ब्रेक - धेरै। एउटा भाँचेको पावर बटन एक सब भन्दा साधारण समस्या थियो जुन मैले सामना गरें जब मैले एप्पल स्टोरमा टेक्नको रूपमा काम गरें।
मैले समस्यालाई बारम्बार व्यवहार गर्दा, एउटा ढाँचा उदय हुन थाल्छ। म एक होईन जसले, यसलाई हेरे पनि। विस्तारित, एक दिन मैले भने, 'अर्को भाँचिएको पावर बटन!' अर्को टेकमा।
'के फोन नरम रबरको अवस्थामा थियो?' उसले जवाफ दियो।
iphone6खोजी मा अड्कियो
'हो,' मैले भने।
र जब मैले ढाँचाको नोट लिन थालें: लगभग सधैं, एक टुटेको पावर बटन संग प्रत्येक आईफोन एक नरम रबर मामला मा राखिएको थियो।
आईफोन मा फिटबिट चार्ज सेटअप गर्नुहोस्
यो केवल सस्तो केस मात्र थिएन। सब भन्दा महँगो, नाम-ब्रान्ड केसहरूमा रबर पनि बिस्तारै बिस्तारै बिग्रन्छ र पावर बटनमा 'थकित' देखिन्छ।
यो मेरो आमालाई भयो। यो डेबिट लिन्चलाई भयो, जुन पेएट फर्वार्डका लेखक थिए। र यो मलाई भयो, जब सम्म म मेरो आईफोनमा केस प्रयोग गर्न रोक्दिन।
अब, त्यस्ता केसहरू छन् जहाँ केस प्रयोग गरिएको थिएन र पावर बटनले अझै ब्रेक गर्यो, तर सामान्यतया ती क्षतिको परिणाम हुन्। र मेरो प्रमाण निश्चित रूपमा वैज्ञानिक छैन। ढाँचा, तथापि, बेवास्ता गर्न धेरै गाह्रो थियो।
के म तपाईको आईफोनमा केस प्रयोग नगर्न सिफारिस गर्दैछु? होईन - विशेष गरी यदि तपाईं दुर्घटनाको शिकार हुनुहुन्छ।
के मलाई लाग्दछ कि यो षड्यन्त्र हो कि एपल उद्देश्यपूर्वक केस निर्माणकर्ताहरूसँग रबर डिजाइन गर्न काम गरिरहेको छ जुन श slowly्का जगाउनको लागि मात्र बिस्तारै राम्रोसँग लगाउँदछ, तर तपाई अपग्रेडको कारणले गर्दा पावर बटन सही असफल हुन पर्याप्त छिटो हुन्छ? होईन, यद्यपि त्यो मनोरन्जन गर्न मनोरञ्जन हो।
केस निर्माणकर्ता: अपराधमा सहयोगीहरू?
यो नोट गर्नुपर्दछ, जबकि एप्पलसँग छ सामानको डिजाईन र टिकाउपनका सम्बन्धमा कडा निर्देशन , तिनीहरू छैन भन्नुहोस् कि कुन प्रकारको रबर वा प्लास्टिकको हुनु पर्छ वा ती केसहरूमा प्रयोग गर्नु हुँदैन।
iphone 5s स्क्रिन बन्द छैन
के तपाईं आफ्नो केस निर्मातालाई विश्वास गर्नुहुन्छ कि समयको परीक्षण खडा गर्ने सामग्रीहरू प्रयोग गर्न? सबैले सोच्छन् कि केसले उनीहरूको आईफोन सुरक्षित राख्छ। कसैले सोध्यो, 'सक्छ मेरो केस मेरो आईफोनलाई बिगार्दै छ? '
छलफल गर्न समय
के तपाईको लागि आईफोन केस सही छ? त्यो तपाईंको निर्णय हो। तर, यस लेखमा प्रस्तुत प्रमाणहरू दिएमा (जेसुकै यो कडा हो पनि), म तपाईंलाई विगतका आफ्नै अनुभवहरूमा विचार गर्न प्रोत्साहित गर्दछु। के तपाईसँग बिग्रिएको पावर बटन छ? के तपाईको आईफोन नरम रबरको अवस्थामा थियो? मलाई लाग्छ हामी दुबैलाई उत्तर थाहा छ।
पढ्नका लागि धन्यबाद, सबै भन्दा राम्रो, र रबर आईफोन केसहरूमा आफ्ना साथीहरूसँग यो साझा गर्नुहोस्,